Ny lalao iOS tsara indrindra amin'ny taona 2018 | Vaovao IPhone
Ny lalao iOS tsara indrindra amin'ny taona 2018
Tao anatin'izay taona faramparany izay dia hitantsika fa nitombo be ny herin'ny iPhone sy ny iPad hatramin'ny lasa mpisolo toerana tonga lafatra ho an'ny konsole portable nentim-paharazanaFarafaharatsiny mba mety ho izy ireo raha toa ka manolotra mifanentana amin'ireo mpanara-maso ny mpandrindra, fifanarahana izay tsy tonga akory.
Rehefa nanomboka namolavola sy nanamboatra ny mpikirakira azy i Apple dia tamin'izay no nanomboka niloka tamin'ity sehatra ity ny deasrrolldaores. Na dia talohan'io daty io aza dia efa nanana lalao marobe am-pelatananay izahay, raha tsy tamin'ny fanombohana ny A4 tamin'ny 2010 vao nahavita izahay afaka nanomboka nahita anaram-boninahitra console tao am-paosinay izahay.
Soa ihany fa mihamaro hatrany ireo studio lehibe mandresy amin'ny sehatry ny Apple. Ohatra roa mazava no hita ao amin'ny lohateny toy ny Fortnite avy amin'ny Epic Games na PUBG avy amin'i Tencent. Lojika, lohateny roa dia anisan'ny lalao tsara indrindra tonga amin'ny sehatra iOS amin'ity taona ity, fa tsy izy ireo ihany.
3 Pokémon Quest
4 Alto's Odyssey
5 Fikomianan'ny mpiaro ny finoana an'i Assassin
7 Fiampitana biby: tobin'ny paosy
Nandritra ny taona dia niresaka matetika momba ny Fortnite izahay ka tsy mila fampidirana izany. Fortnite dia lasa milina fanaovana vola hatramin'ny herinandro voalohany nanombohana tamin'ny sehatry ny finday Apple. Epic Games dia nahavita nanao zavatra tena tsara, satria ny manintona lehibe atolotray anay amin'ity kinova ity dia ilay hitantsika tamin'ny PC sy ny console.
Na inona na inona fitaovana ampiasaintsika, Fortnite dia manome antsika traikefa mitovy, sarintany mitovy, iraka mitovy, fanamby mitovy, tarehin-tsoratra mitovy. Ho fanampin'izany, mamela antsika hilalao amin'ny namana mampiasa fitaovana hafa koa io, na PC io na console rehetra. Raha te hankafy Fortnite, ny finday avo lenta dia tsy maintsy farafaharatsiny iPhone SE na iPhone 6s.
Fortnite dia azo alaina maimaim-poana tanteraka ary afaka milalao tsy misy fetra isika. Raha te-hampanjifa ny toetrantsika amin'ny hoditra isika dia tsy maintsy mamaky ny fizahana, satria io no fomba tokana ahazoan'ny orinasa vola ny lalao, rafitra iray miasa toy ny hatsaran-tarehy.
Raha heverinao fa zaza loatra i Fortnite ary mitady lalao azo tanterahina bebe kokoa ianao, ao amin'ny App Store dia misy PUBG Mobile ananantsika. Ny kinova finday an'ny PUBG manolotra antsika ny traikefa mitovy amin'ny amin'ny kinova ho an'ny PC na consoles, ao anatin'izany ny sarintany sy ny tabilao. Ny rafitra fanangonam-bolan'ny PUBG Mobile dia mitovy amin'ny Fortnite, satria afaka maka maimaim-poana tanteraka ny lalao isika ary tsy misy karazana fetra.
Raha te hanana hoditra hamboarina ny toetrantsika, ny fiara na ny fitaovam-piadiana azontsika amin'ny lalao, dia tsara kokoa ny mampiasa ny Royal Pass, izay manana vidiny 10 euro, ary izany manolotra valisoa 100 amin'ny karazany isan-karazany, hahafahana mampifanaraka ny toetrantsika.
Tsy toy ny Fortnite, PUBG Mobile miasa amin'ny finday rehetra amin'ny iOS 12, Ny iPhone 5s no fitaovana tranainy indrindra ahafahantsika mankafy ity lalao ity, lalao iray izay tsy maintsy hitsapana ny tanjontsika ihany, fa koa ny paikadintsika hahatongavana amin'ny boriboritany farany velona.
PUBG MOBILE 1.5: FANAFAHANAmaimaim-poana
Tamin'ny volana Jona lasa teo, tonga tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny sehatry ny finday Apple ny Pokémon Quest. Ao amin'ny Pokémon Quest dia mila mandeha miaraka amin'ny ekipan'ireo biby goavambe isika miady ary mahita zavatra miafina. Ny sasany amin'ireo zavatra hitantsika dia ahafahantsika manamafy ny Pokémon antsika, ny hafa kosa azontsika ampiasaina mba hisarihana zavaboary hafa ho any amin'ny tobintsika.
Maimaimpoana tanteraka ny Pokémon Quest Ary na dia samy hafa aza ny fividianana fampiharana ao anaty lalao dia tsy voatery atao amin'ny fotoana rehetra ireo, noho izany dia tsy ilaina amin'ny fotoana rehetra izy ireo vao afaka mankafy ity lalao ity.
Alto sy ny namany dia namely ny App Store indray tamin'ny alàlan'ny traikefa nahafinaritra antsoina hoe Alto's Odyssey. Amin'ity traikefa nahafinaritra vaovao ity manolotra antsika ny traikefa mitovy amin'ny lalao, mahita biome vaovao sy manaitra izahay, ny toetr'andro amin'ny nofinofy ary mekanika lalao tena manintona. Raha nankafy ny Alto's Adventure ianao, dia azo antoka fa ho tianao ity kinova vaovao ity.
Raha mbola tsy nilalao ny Alto's Adventure ianao dia tsy ilaina ny afaka milalao ilay kinova vaovao. Mora ihany koa ny mianatra ny mekanika lalao, mahafinaritra ny feon-kira ary koa Raha manana Apple TV ianao dia afaka mankafy azy io bebe kokoa hatrany.
Odtosey Alto€ 5,49
Fikomianan'ny mpiaro ny finoana an'i Assassin
Ny sassassa Assassin's Creed dia nanjary kilalao teo amin'ny tontolon'ny lalao video, izay nanao hetsika ihany koa fisehoan'ny sarimihetsika sehatra finday no fijanonana manaraka eny an-dalana. Assellin's Creed Rebellion dia a Paikady RPG izay tsy maintsy hidiran'ny mpilalao amin'ny firahalahiana misy mpamono mahery vaika hiadiana amin'ny Templars sy ny famoretana any Espana. Ity fanontana ity dia ahitana tarehintsoratra maherin'ny 40, ny sasany amin'izy ireo dia angano vaovao kosa ny sasany.
Azontsika atao ny misintona ny lalao maimaim-poana, saingy, toy ny mahazatra amin'ity karazana lalao ity, hahafahantsika mankafy azy amin'ny fahafenoany dia tsy maintsy mamaky ilay boaty isika ary mampiasa ilay hafa fividianana fampiharana manolotra izany.
Fikomiana amin'ny mpiaro ny finoanamaimaim-poana
Nandritra ny herinandro vitsivitsy, ary aorian'ny fiandrasana ela, ny simulateur fananganana Tropico dia azo alaina amin'ny iPad izao. Ao amin'ny Tropico isika no mpitondra elektro vaovao "El Presidente" ary ny iraka ataontsika dia mitondra ho avy tsaratsara kokoa ho an'ny mponina Tropico rehetra. Ilay nosy dia manana loharanon-karena be dia be tsy voadinika izay manana tanjaka lehibe tokoa.
To be able mankafy ny tropika, ny fitaovantsika dia tsy maintsy ho iPad taranaka faha-5 na avo kokoa, mamela ny iPad Air 2, fitaovana izay mandraka ankehitriny no fitaovana farafahakeliny afaka mankafy lalao maro.
Fiampitana biby: tobin'ny paosy
Fiampitana biby: Pocket Camp dia kinova kely an'ny Nintendo classic izay tsy maintsy ilain'ny mpilalao mandehana mitoby miaraka amin'ny namanao, mandrindra ny faritra fialamboly, haingo ny toerana misy fanaka ho an'ny olom-biby vao hiditra ... Fa ankoatra izany, afaka mandeha manjono, mihaza bibikely, mividy entana, manao asa fitoriana feno koa izahay, manamboatra fitaovam-piasana handravaka ny toby ...
Toy ny kinova am-boalohany ny lalao, tena marina ny fotoana mandalo, Ka rehefa manokatra ny rindranasa ianao dia hitaratra ny lalao ny andro andalovantsika, izay mety hisy fiatraikany amin'ny fiasan'ny biby any izay nametrahantsika ny lay. Hita ao amin'ity kinova ity koa ny lafiny sosialy, amin'izay dia afaka mitsidika ny tobin'ny namantsika izahay hijery ny endrik'izy ireo, mivarotra na mifanakalo zavatra ...
Fiampitana biby: tobin'ny paosymaimaim-poana
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Lalao IPhone » Ny lalao iOS tsara indrindra amin'ny taona 2018
Tesla sy Microsoft dia mandresy an'i Apple amin'ny fiainana manokana, hita ny fanadihadiana
Apple dia mamoaka kinova faharoa amin'ny iOS 12.1.2 farany